टर्की होटेल3तार्सो विवरण र सुविधाहरू टर्की
टर्कीको बजेट होटलहरू "एकाई" बाट "युनिट"-/ H2>:
सस्तो होटलहरू बच्चाहरूको लागि टर्कीमा सस्तो होटलहरू - यो "चार" हुन सक्छ, जुन सान्त्वनाको हिसाबले "पाँचजनाहरू" भन्दा धेरै नै अवर छ, तर कहिलेकाँही मूल्यमा एकदम फरक हुँदैन। तपाईं एक राम्रो तीन-स्टार होटल पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा प्रबन्धकहरूले बेलेकमा सस्तो टर्की होटलहरू लिनेछन्, बच्चाहरूसँग आराम गर्न, ताकि बजेट पूरा गर्न सल्लाह दिनुहोस्, तपाईंलाई पनि सम्भव भएसम्म आराम गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्य बजेट।
<< p> हाम्रो कम्पनीले धेरै टर्कीट होटेलहरूसँग जडान स्थापित गरेको छ, जस्तै: klasdomhotenex 3, arynia4* armeiamage3* * पक्षमा, आदि
<< p> सामान्यतया, यदि तपाइँ सक्षम र अनुभवी अपरेटरमा भ्रमणको चयन सुम्पनु भयो भने, तपाईं सस्तो र सकीमा सहजै पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा धेरै ग्राहकहरूले पहिले नै उत्कृष्ट प्रभावहरू प्राप्त गरिसकेका छन् र हाम्रो वेबसाइटमा समीक्षाहरू साझा गरे।
एन्टिलिया टर्कीको रिसोर्ट शहर हो, जहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू आउँछन्। समुद्र तट, समुद्र, सुन्दर प्रकृति, धेरै आकर्षण, न्यानो मौसम र आवासमा एक ठूलो संख्या हो - यो शहरलाई सँधै पाहुनाहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
तीन-स्टार होटेल एन्टिलेमा पाँच स्टार अपार्टमेन्टहरूमा समायोजित गर्न नसक्नेहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो, तर राम्रोसँग आराम गर्न चाहन्छ।
एन्टिलिमा तीन-स्टार होटेलको बुकिंग
केमर होमलहरू सबै लाइनहरू
बच्चाहरू सस्तोमा टर्की जान चाहान्छन्? यस अतिथि सजग गराउने देश, जहाँ पर्यटन मुख्य बजेट लेख हो, उच्च-गुणस्तरीय बिदा बिभिन्न मूल्य कोटिहरूमा उपलब्ध छन्। निस्सन्देह, अधिकतम सम्भावनाहरू एक-स्टार होटेलले एक-स्टार होटेल प्रदान गर्दछ, तर सस्तो होटेलमा पनि, तपाईं उल्लेखनीय रूपमा आराम गर्न र तपाईंको छुट्टी र छुट्टीमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो, एक शासनको रूपमा एक सस्तो होटेल, मुख्य रिसोर्टबाट केही टाढा बाहिरी इलाकामा अवस्थित छ, त्यसैले यसले लामो समय लिन्छ। नजिकको एयरपोर्टबाट सडक 2- hours घण्टा सम्म लिन सक्दछ। जे भए पनि, तपाईं शटल अर्डर गर्नुहुनेछ, वा तपाईं होटलको ढुवानीमा भेट्नुहुनेछ, र यो वातानुकूलितसँग आरामदायी कार हुनेछ।
सस्तो होटेलहरू टर्कीमा काम गर्नेहरू पनि छन् कि ती व्यक्तिहरू पनि पनि पूर्ण रूपमा एक सुपरिवेशीत पोषणको आवश्यकता छ। , टिकटको लागतको अतिरिक्त, र तपाईं सान्त्वनाको सन्दर्भमा तपाईंसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी भाँडाका लागि मालिश सेवाहरू, मालिश सेवाहरू, मालिश सेवाहरू, स्पा, स्नान र हममाम, आदिको प्रयोगको लागि स्ट्रोलरहरू हुन सक्छन् एनिमेसन एक हप्ता वा अनुपस्थित एक पटक मात्र हुन सक्छ।
मा स्टार होटलहरू:
होटलहरू यस वर्गको होटेलहरूले आफ्ना पाहुनाहरूलाई उत्कृष्ट सेवा, आरामदायक र सबै सुविधाहरू सहित प्रदान गर्दछ: उच्च-गुणवत्ता फर्निचर, आवश्यक उपकरणहरू, बाथरूम। त्यहाँ शारीरिक सीमितता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुविधाहरू पनि छन्।
playing को घर, लुगा धुलो, सुक्खा सफाई, श्रम, फिटनेस डेस्क, टर्की, टर्की डेस्क, मालिश, टर्की डेस्क,224 घण्टा दर्ता
एन्टिलेको रिसोर्ट शहर मा आराम गर्न योजना? हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले जति सक्दो चाँडो एक कोठा बुक गर्नुभयो। तपाईं यसलाई अनलाइन बुकिंग सेवा मार्फत यो गर्न सक्नुहुन्छ होटलहरूको ग्रह हो। केवल तपाईंको समयको पाँच मिनेट - र तपाईं चिन्ता नहुन सक्नुहुन्छ कि यहाँ आउँदैछ आफ्नै कोठाबिना भेट्टाउनुहुनेछ।
र्यामर (टर्री) मा सबै भन्दा राम्रो होटेलहरू (टर्की) मा, साथै बेलिबिरोभाका गाउँहरूमा ध्यान दिनुहोस्। हामी बच्चाहरू र युवा कम्पनीहरूको साथ पारिवारिक जोडी समायोजित गर्न सस्तो ठाउँहरू पाउने छौं। हामी मूल्यहरू सिक्छौं र यात्रा गर्दा बचाउन तिनीहरूलाई सिकाउँछौं।
टर्की रिसोर्ट्स रूसीहरूको लागि परिचित र सुविधाजनक छन्। टाढा नभई उडान कालो साग वा विदेशमा विदेशमा बढी सस्तो हुन्छ। यस अवस्थामा, सेवा वर्ग स्पष्टसँग माथि छ। विशेष गरी हाइलाइट तर पर्यटकहरू पहिलेका कुरा जान्नु आवश्यक छ कि होटलहरू अन्य विकल्पहरू भन्दा लाभदायक बुक गर्न आवश्यक छ।
यस सामग्रीको समीक्षा पर्यटकहरूको समीक्षामा हामीले वास्तवमै आरामदायी स्थानहरूको चयन गर्यौं, जहाँ तपाईं गलतको न्यूनतम मुडको कमीको साथ खर्च गर्न सक्नुहुनेछ चयनित होटल।
मा समावेश गर्दछ
होटलको स्थानको लागि .6..6 अंकहरूको अनुमानित। पाहुनाहरू 7220 मिटर लामो समुद्री तट पट्टीमा गिरावट आएको पाहुनाहरू। कोठा रमाइलो रूपमा सजाइएको छ, प्रत्येक पाहुनाले व्यक्तिगत बालकनीलाई रमाईलो गर्छन्। सकारात्मक प्रतिक्रिया जिममा आइपुग्छ। सात दिनसम्म शुल्क 1 132,000 रूबल छ। यस स्थानको अधिक विस्तृत विवरण हामीले पहिले नै दिएका छौं।
यदि कुनै अवधारणा छैन भने कुन होटलले केटल (टर्की) मा आराम गर्न छनौट गर्न सक्दैन, तब यो विकल्प साहसी भई सिफारिस गर्न सकिन्छ। पूर्व आगन्तुकहरूले कर्मीहरूको प्रभावशाली वर्ग मनाउँछन्। बचत मा एक कोर्स छ, र यसैले बाँकी मानिसहरू को ख्याल राख्छन् जो आइपुगेका छन्। हताशता जटिल क्षेत्रको व्यवस्था हो। हामी यहाँ वैकल्पिक विकल्पहरूको लागि खोजी गर्न अस्वीकार गर्यौं।
पुरानो रोमान्टिक स्वामित्व टर्की शहर पक्ष। यसको जीवविज्ञान, भेस्सियन र अन्य महान, यो यहाँ थियो, एन्थोनी र क्लिपेट्राले उनीहरूको गोप्य मितिहरू व्यवस्थित गरे। छोटकरीमा, प्रेमीहरूको लागि स्वर्गमा। तसर्थ, होटेलमा टर्डर्सहरूले नवविवाहित जोडीहरूबाट ध्यान पाउँदछन्।
आज यो टर्कीको सब भन्दा द्रुत बढ्दो रिसोर्ट हो। असंख्य होटेलहरूले समुद्रीतर्फ निवारणमा पर्यटकहरू उच्च-गुणवत्ता चाडहरू प्रस्ताव गर्दछन्। रेटिंग होटेल पक्षमा सान्त्वनाको एडियनयुक्त स्तरलाई भेट्ने दशौं, चार-तारा होटलहरू सामेल छन्। रेस्टुरेन्टहरू र क्यासिनोहरू र क्यासिनोहरू, समुद्री किनार वरिपरि र पसलहरू।
पर्यटकहरूको प्रवाहको महत्वपूर्ण भाग युरोपेली देशका बासिन्दा हुन्। साइड होटलको लागि मूल्य सेवाको स्तरमा निर्भर गर्दछ र प्रदान गरिएको सुविधा। तपाईं सजिलैसँग तपाईंको अनुरोधहरू र क्षमताहरू अनुसार कोठा वा अपार्टमेन्टहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। र जब पूर्व बुकिंग एक होटल तपाईं एक महत्वपूर्ण छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पक्षमा धेरै होटेलहरू खुशीको साथ बच्चाहरूको साथ परिवार लिन पाउँदा खुशी छन्। उनीहरूको मनोरन्जनको लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू प्रदान गरिएको छ, विशेष क्षेत्रहरू सुसज्जित छन्, राज्यको एनिमेटरहरू तयार छन्। छेउछाउका बच्चाहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो होटलहरू पानीको पार्क, असंख्य बच्चाहरूको सवारी छन्।
<< p> के उचित र स्वस्थ खाना बिना के आरामदायी, कहिलेकाँही अनुभवी विदेशी! पक्षमा सबै भन्दा राम्रो होटेलहरूले आगन्तुकहरूलाई सहज जीवनका अवस्थाबाट मात्र आकर्षित गर्दछ, तर उनीहरूको रेस्टुरेन्टको एक उत्कृष्ट बहुराष्ट्रिय भाँडो पनि। असंख्य बारहरू, खाजा बजहरू तटमा छरिए। बाटोमा, धेरै रेस्टुरेन्टहरू र होटेलको होटेलहरू नि: शुल्क रातो दाखमद्य प्रदान गर्थे। यो लगभग सबै चीजहरूको चारैपट्टि parts ताराहरूको राम्रो होटलहरू द्वारा छुट्याइएको छ।
युवावस्थाको प्रत्येक शहरसँग टर्की छेउमा टर्की छेउमा। प्रत्येक वर्ष आधुनिक भवनहरू यस रिसोर्ट क्षेत्रमा बढ्छन्। यी नयाँ होटलहरू छेउमा छन्। भाग पार्कको साथ पक्ष होटेलहरूले ठूलो माग गर्दैछन्, प्राय: जसो तिनीहरू बच्चाहरूसँग परिवारहरू छान्छन्।
पूर्ण नयाँ चार-स्टार होटल "अपरश स्टोरी बीच" अपर्याप्त वर्ष समुद्री सतहमा खडा छ, नजिकको एयरपोर्ट एन्टिले हो - kill 75 किलोमिटर छ। चार-कहानी भवनमा सबै कोठाहरू समुद्रलाई बेवास्ता गर्छन्, दुई-कहानी बंगलमममा - आधा कोठाको आधा भन्दा बढी। प्रत्येक अपार्टमेन्टको टेरेस वा बालकनीमा, एक स्प्लिट-एयर कन्डिसन प्रणाली, नुहाउने, र पायलफायरहरू सबै वाइफाइमा पहुँच छ।
तीन-स्टार होटेलले एक केसलाई लिन्छ, जसमा 44 44 कोठाहरू अवस्थित छन्। पाहुनाहरूले बस मा समुद्री तटमा 000000 मिटरको दूरीमा लिन्छ। सूर्य लाउन्ज, छाता र गद्दाहरू स्वतन्त्र छन्। प्रत्येक कोठामा बाथटब छ, टिभीको रूसी च्यानल, वातानुकूलन, टेलिफोन र अन्य सुविधाहरू। होटलको इलाकामा एक रेस्टुराल र बारहरू, बाहिरी पोखरी, एक बाहिरी पोखरी, जसले भाडा द्वारा लिएको कार प्रयोग गर्न सक्दछ।
जादुई सुगन्ध चमिन तपाईसंगै जहिले पनि तपाइँ जेस्मिन साइड होटल * * मा बसोबास गर्नुहुन्छ भने, यो एन्टिलेआ एयरपोर्टबाट 55 55 किलोमिटर हुन्छ। आवश्यक घर उपकरणहरूको सेटको साथ आकाशका कोठाहरू। होटलमा पौडी खेल्ने पोखरी, रेस्टुरेन्ट, बारहरू, सक्रिय फुर्सत गतिविधिहरूको लागि असंख्य मनोरन्जन र खेल मैदानहरू छन्। आफ्नै समुद्री तटमा hundriffict सय मिटरमा, समुद्री तटेलहरूको लागि, तथापि, यो भुक्तान गर्न आवश्यक हुनेछ।
एक अपेक्षाकृत नयाँ होटेल जटिल पदार्थले अशक्त पाहुनाको लागि कोठा सहित धेरै भवनहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ तपाईंको बलौटे समुद्र तट छ। शपिंगको लागि त्यहाँ साइटमा ट्रेडिंग दायरा हो। व्यापार बैठकहरूको लागि, एक आरामदायक कन्फरेन्स कोठा डिजाइन गरिएको छ। यसले नि: शुल्क टर्की स्नान गर्दछ, एक्लैआइरोबिक्स, टेनिस अदालत, डार्टहरू र अन्य मनोरन्जनहरू। एक शुल्क को लागी - विन्डस्शर्फिंग, स्लट मेशिन, मालिश र अन्य आनन्दहरू।
--स्टार होटेलको औसत आकार समुद्री किनारमा mm किलोमिटर मध्यमैको किनारमा छ। नजिकको एयरपोर्ट 55 55 किलोमिटर छ। होटलको अतिथिहरूले आफ्नै स्यान्डि समुद्री तटमा आनन्द लिन्छन्। यसले आरामदायी पोखरी, खेल मैदानहरू प्रदान गर्दछ, सिमुलेटरहरूको साथ कोठा। स्टाफ ध्यानपूर्वक ध्यान दिन्छन्, सफा। यहाँ शान्त र अनाधिकृत विश्रामको फ्यानहरू बसोबास गर्न राम्रो छ, जसले शान्ति, सह-संरक्षण र हेरचाहको वातावरणको कदर गर्दछ।
यो विश्वास छ कि टर्कीमा कम स्तरमा तीन-तारा होटेलहरूमा अपर्याप्त खाद्यान्नमा। धेरै जसो होटलहरूलाई, यो वास्तवमै सम्बन्धित छ, त्यहाँ पनि तपाईं राम्रो र सस्तो रूपमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं पनि छन्।